ब्रान्ड सहायता: ब्रान्डि ofको राज्य | Martech Zone
शुक्रबार, डिसेम्बर 29, 2006 सोमवार, मे 18, 2015 Douglas Karr
म एक महान पार भयो पोस्ट आज बेलुका ब्रान्डिंगको राज्यको बारेमा। म लेखक ब्रैड भनाउकेनसँग असहमत छु, तर म केहि बुँदाहरू जोड्न चाहन्न। यो दुई वर्ष भयो जबदेखि मैले औपचारिक रूपमा काम गरें र साइड ब्रान्ड प्रबन्धकहरूसँग, तर म एउटा मुख्य कुरा गर्न चाहन्छु जुन स्पष्ट हुन सक्छ तर आवश्यकताहरू भनेका छन्।
पछिल्लो दशकमा अखबारको उद्योगमा हुँदा, मैले ब्रान्डलाई नियन्त्रण गर्ने वा प्रबन्ध गर्ने क्षमतामा बढ्दो गिरावट देखेको छु। भिजुअली, यो अझै पनी साधारण थियो ... रंग, लोगो, र उत्पादन परिवर्तन भएन। यद्यपि ब्रान्ड गर्नुभयो। ब्रान्ड भित्रबाट बाहिर परिवर्तन भयो।
हाम्रो सन्देश र दर्शन एकरूप थिए। यद्यपि मध्यम जसद्वारा मानिसहरूले प्राप्त गरे ब्रान्ड हामीबाट व्यक्तिमा परिवर्तन हुँदैछ, इन्टरनेटको माध्यमबाट, डेलिभरीका माध्यमबाट, ग्राहक सेवा गर्ने व्यक्तिहरू मार्फत, ग्राहकहरू मार्फत, हाम्रो अनलाईन प्रतिस्पर्धा आदि।
यो सदाझैंको व्यापार थियो। हामी सबै लहरिएर मुस्कुरायौं र हाम्रा औंलाहरू औंल्याए जब यी माध्यमहरूले भने र हामीलाई नष्ट गरिरहेका कामहरू गरे, र हामीले केहि पनि गरेनौं। नतिजाको रूपमा, ब्रान्ड असफल हुन थाले - र तिनीहरू अझै असफल भइरहेका छन्। मैले यो देखेँ, म चिच्याएँ, र मलाई बाहिर निस्केर देखाइएको थियो (धन्यबाद)।
कहिलेकाँही अन्य उद्योगहरूमा यो छिटो हुँदैन, तर हामी सबै ठाउँमा यस संक्रमणलाई देखिरहेका छौं। मुद्दामा यो हो कि तपाइँको ब्रान्डको प्रबन्धकहरूले यसको बारेमा केहि गर्दै छ। तपाइँको ब्रान्ड प्रबन्धकहरू कसरी प्रभावकारी रूपमा संचार गर्दै छन् कि तपाइँको कम्पनीले यी नयाँ माध्यमहरू मार्फत आफ्ना ग्राहकहरूलाई सन्देश दिन कोशिस गरिरहेको छ? के तपाइँका सबै कामदारहरूले महसुस गर्छन् कि उनीहरूले ब्रान्डको प्रबन्ध गरिरहेका छन्? के तिनीहरू यसको लागि जिम्मेवार छन्? यसको सामना गर्न उनीहरूलाई कसरी प्रशिक्षण दिइन्छ? तिनीहरूको ब्लगहरूले तपाईंको ब्रान्डको बारेमा के भन्छ?
अब तपाईंको ब्रान्ड प्रबन्धक भन्दा ठुलो कम्पनीको गुणस्तर हो। मलाई विश्वास छ श्री VanAuken ले यसलाई व्याख्या गर्ने एक राम्रो काम गर्छ। मुद्दालाई म्याग्निफाइ गर्ने विकल्प छ। उपभोक्ताहरू नयाँ विकल्पहरूमा छिटो छिटो उनीहरू तपाईंको ब्रान्डको बारेमा नराम्रो खबरहरू सुन्नेछन्। विन्दु मा मामला, अर्को रात म पोस्ट गरियो बारेमा Swapagift.com। पोष्टिंग पछि, म सेवाको बारेमा कुरा गरिरहेको फोरममा आइपुगें र अर्को सेवालाई राम्रो प्रकाशमा सन्दर्भित भेट्टाए ... कार्डअवेन्यू। मिनेटमा मैले एक उत्कृष्ट उत्पादन फेला पारे (यसको मार्केटिंग मार्फत होईन) र उही उत्पादनको वैकल्पिक प्रदायक भेट्टाए (उनीहरूको मार्केटिंग मार्फत होइन)!
यो कत्ति छिटो खराब समाचारले यात्रा गर्दछ र आश्चर्यजनक छ प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पहिले भन्दा बढि, तपाईंको ब्रान्ड प्रबन्धकले बाहिरी रूपमा गरेमा आन्तरिक सञ्चारको लागि त्यति प्रयास गर्नु आवश्यक पर्दछ। ती सबै तपाइँका सबै कामदारहरूको लागि ईभान्जलिस्ट र कोच हुनुपर्छ। तपाईको सेवा, तपाईको उत्पाद र सबै भन्दा बढि तपाईका मानिसहरू तपाईको ब्रान्डलाई संचार गर्नको लागि सब भन्दा ठूलो माध्यम हुन्। उनीहरू कस्तो गर्दैछन?
टैग: ब्रान्डब्रान्डि strategy रणनीतिब्रान्डि stateको राज्य
धन्यबाद, डोरियन क्यारोल र टेक्नोराटी!
डिसे 29, 2006 मा 11: 35 AM
म धेरै भाग्यशाली महसुस गर्छु, एक स्टार्ट-अप उद्यमीको रूपमा, शुरूबाट नै सोशल नेटवर्कि and र सेल्फ-ब्रान्डिंगको बारेमा सिकेको छु। तपाईंको संदर्भ लेखमा लेखकले यी बुँदाहरूलाई जोड दिए: "जागरूकता, पहुँच, मान, सान्दर्भिक भिन्नता र भावनात्मक जडान।" म बढ्दै जाँदा यी बिन्दुहरूलाई हिर्काउने काममा छु। मेरो ध्यान अब फ्रिको लागि मान दिईन्छ, विश्वसनीयता निर्माण गर्न। थप, म फुलेको नौकरशाहीद्वारा गएको छैन। BTW, म राम्रो गर्दै छु!
भिन्स, एक्ल प्रोप, ईबे विक्रेता, कसरी लेखक।